Fayez Mohamood's Articles on Martech Zone |
Maqaallada by Fayez Mohamood
Fayez Mohamood waa isku-xidhe iyo agaasime guud Bluecore, U saamaxaya suuqleyda eCommerce inay abuuraan oo ay qaybiyaan e-mayl shakhsiyadeed oo shakhsiyadeed kiciyay oo leh xawaare iyo sax aan hore u suurtagal ahayn, si firfircoon uga falcelinta dabeecadaha macaamiisha iyo diiwaangelinta isbeddelada ilbiriqsiyo. Iyadoo in ka badan 70 wada-hawlgalayaal matalaya in ka badan 100 magac oo macaamiil ah. Bluecore waa mid ka mid ah bilowga xawaaraha koraya ee magaalada New York, dhawaana wuxuu xirayaa wareeg taxane ah oo uu hogaaminayo FirstMark Capital.
Ku Tag Weyn Istaraatiijiyad Iimayl ah oo Kiciye si aad u Wado Sky-High ROI
Arbaco, Juun 29, 2015 Arbaco, Juun 29, 2015 Fayez Mohamood
E-mayllada la kiciyey ayaa ah hab fiican oo macaamiisha loola macaamilo loona kaxeeyo iibinta, laakiin fikradaha khaldan ee ku saabsan waxa kicin kara iyo sida loo hirgaliyo iyaga ayaa ka ilaaliya qaar ka mid ah suuqleyda inay si buuxda uga faa'iidaystaan ​​taatikada. Waa maxay Email kiciyay? Heerkeeda aasaasiga ah, kicintu waa jawaab otomaatig ah, sida salaanta dhalashada ee otomaatigga ah ee ka timid Google. Tani waxay u horseedaa qaar inay aaminaan emailada kiciyay in loo isticmaali karo oo keliya xaaladaha xaddidan. Laakiin dhab ahaan, ka